I-Lighthouse on the Bay, Cabot Trail St. Anns, N.S
Inqaba enesibane phezulu sinombuki zindwendwe onguRosella
IMonroe Point Lighthouse yakhiwa ngowe-1905. Le yayiyiCanadian Federal Lighthouse esebenzayo de kwangowe-1962 yaye iseSt. Ann’s, N.S.
Ababhali, ababhali beengoma kunye namagcisa bayonwabele indawo enoxolo, izilwanyana zasendle, iintaba kunye nemibono yolwandle. Ubungasese bokuyila kwimeko yembali.
Jabulela iinkwenkwezi ezintle ebusuku, ukuphuma kwelanga okumangalisayo phezu kweNtaba yeKelly kunye nemibono emangalisayo yaseSt Ann's Bay. Ikholeji yaseGaelic yimizuzu emi-5 kwaye sikwindawo ekumbindi wesiqithi.
Hlala kwenye yezona dilesi zidumileyo eCanada, iCabot Trail kunye nakwiCanadian Federal Lighthouse yethu eyekiweyo.
Le Monroe Point Lighthouse iye yahlaziywa ukuze igcine imbali yemizi-mveliso ivakale kwi-lighthouse ngokongeza uhlaziyo oluthile oluzisa umoya wexabiso kunye ne-rustic.
Silandele kuFacebook, “Lighthouse on the Bay”. Sithanda ukuhlaziya iindwendwe zethu kunye nabalandeli kulonwabo lwasekhaya kunye nemisitho. Sikwahlaziya iphepha lethu ngalo naluphi na ulungiso olutsha kwindlu yesibane. I-lighthouse ifaneleke kakhulu kwiindwendwe ezi-2. Yinto entle kakhulu enebhedi yenkosi (umatrasi kaCasper) kwigumbi lokulala.
Indlu yethu yesibane ingaphezulu kweminyaka eli-100 ubudala, ke ngoku iza nazo zonke iimpawu zayo ezizodwa kunye nendalo eyingqongileyo. Vuka uye kumaza olwandle, ube nekofu kwindawo yakho engaphambili ngelixa ilanga liphuma phezu kwentaba kaKelly kwaye ubukele umlobi wasekhaya erhuqa imigibe yabo. I-St. Ann’s Bay intle izolile kwaye izolile.
Hamba kulwandle lwethu lwendalo kwindawo ephantsi, fumana zonke iintlobo zobuncwane, iglasi yolwandle kunye nezinto ezenziwe ngodongwe ezihlanjiweyo. Hamba phantsi elunxwemeni kwaye ufumane indawo eselunxwemeni eselunxwemeni, yiza nesitulo, itawuli yaselwandle, ipikniki encinci kwaye uyonwabele.
Sinokukunceda ukucwangcisa ukuhlala kwakho, ukwenza iingcebiso zasekhaya malunga neendawo zokutyela, ukuqesha isikhokelo sokuloba, okanye ukubonelela ngesidlo selobster. IKholeji yaseGaelic libali nje eliqhuba kwaye iBaddeck yimizuzu engama-20.
ICape Breton intle. I-lighthouse yethu ifumaneka kwi-bay e-St. Ann, apho uya kubona iimbono ezikhangayo, kwaye iinkwenkwezi ebusuku zezona ziqaqambileyo oza kuzibona. Ngamanye amaxesha ukuhlala kwiindawo ezintle kuza nezinto eziphazamisayo ezincinci. Ngenxa yeentaba neentlambo zethu sinokuba nemimandla ethile yesiqithi enenkonzo ephantsi yeeseli, kuquka nendlu yethu yesibane eSt.
Kuninzi kakhulu okubonayo nokwenza eSt Ann's nakuyo yonke iCape Breton. Abantu balapha bathanda iinkcubeko zethu ezahlukeneyo, kwaye bayayonwabela nangaphandle, ngokunjalo. Iindlela ezininzi zokuhamba intaba, iingxangxasi, iivenkile zamagcisa, iindawo zokutyela zasekhaya, iimyuziyam kunye neendawo zomculo kwisiqithi sonke.
Siza kukuthumelela amakhonkco kulingo lwasekhaya, umtsalane kunye neendawo zokutyela ngaphambi kokufika kwakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo sicela usithumelele umyalezo, siyavuya ukwenza iingcebiso.
ISt Ann's Bay ikwadume ngamagcisa ethu akumgangatho wehlabathi. Ukusukela ngoMeyi ukuya kuNovemba, uya kufumana aba bantu bexakekile besenza iziqwenga ezothusayo kuzo zonke iintlobo zemidiya - wamkelekile ukuba ubabukele besebenza. Ngexesha lokuphumla, biza phambili. Ehlotyeni, cwangcisa ukuthatha iintsuku ezimbalwa ukutyelela wonke umntu!
Umbuki zindwendwe ngu- Rosella
Nge-COVID-19 unxibelelwano lwethu lweendwendwe lutshintshile. Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu kwaye siyathanda ukuva ukuba imini yabo ibijonge iSiqithi sethu esihle, amaxesha amaninzi ngaphezulu kweglasi yewayini.
Ngelishwa unxibelelwano lwethu lweendwendwe kufuneka lubekelwe umda njengoko sinalo ilungu losapho elikwimeko yempilo esichengeni.
Sisengumyalezo nje kwaye silapha ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo.
Ukuba une-ID yesithombe esele ithunyelwe oko kuhle, ukuba akunjalo nceda uthathe imizuzwana embalwa ukufaka umfanekiso wendwendwe (wena) ungenayo. Oku kusinceda ngokwazi ukuba ngubani oza kukhuseleko lwethu kunye nolwakho kunye nomntu obhukishayo. uhambo kufuneka lube lundwendwe. Akukho kubhukishwa komntu wesithathu ngezizathu ze-inshorensi. Asize sicele phambi kokuba sivume ukubhukisha, kodwa sicela ubuncinci iveki phambi kokuba size ifoto.
Nge-COVID-19 unxibelelwano lwethu lweendwendwe lutshintshile. Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu kwaye siyathanda ukuva ukuba imini yabo ibijonge iSiqithi sethu esihle, amaxe…
Inombolo yomthetho: RYA2020-000976